Ozone: ihe ọ bụ, àgwà, ojiji na mkpa | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 25/11/2021 13:28 | Ciencia
El ozone (O3) bụ molekul mejupụtara atọ oxygen atọ. A na-etolite ya mgbe ụmụ irighiri ihe ikuku oxygen na-enwe obi ụtọ nke ukwuu iji gbarie n'ike abụọ dị iche iche nke ikuku oxygen, na nkukota n'etiti atọ dị iche iche bụ ihe kpatara ozone. Ọ bụ allotrope nke oxygen, ya bụ, ọ bụ n'ihi nhazigharị nke atom oxygen mgbe a na-ahapụ ụmụ irighiri ihe. Ya mere, ọ bụ ụdị oxygen kacha arụ ọrụ.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ị chọrọ ịma banyere ozone, àgwà ya na mkpa maka ndụ.
1 Gịnị bụ ozone
3 Ozone oyi akwa
Gịnị bụ ozone
Ozone bụ ngwakọta gas na-acha anụnụ anụnụ. N'ọnọdụ mmiri mmiri, Ọ bụ indigo-acha anụnụ anụnụ na okpomọkụ n'okpuru -115ºC.N'okwu ya, ozone na-agbaze nke ukwuu, n'ihi ya, ọ bụ ya na-ahụ maka ikpochapụ, sachapụ na ikpochapụ microorganisms pathogenic, dị ka nje, nje bacteria, fungi, ebu, spores, wdg.
Ozone nwere ike iwepụ isi ọjọọ site n'ịwakpo ihe na-akpata ísì ọjọọ (ihe na-esi ísì ụtọ) ma ọ dịghị etinye ísì ọ bụla ọzọ dị ka ikuku fresheners iji gbalịa ikpuchi ya. N'adịghị ka ọgwụ nje ndị ọzọ, ozone bụ gas na-adịghị akwụsi ike nke ga-agbaze ngwa ngwa n'ime ikuku oxygen n'okpuru ọrụ ọkụ, okpomọkụ, ihe mgbagwoju anya electrostatic, wdg.., n'ihi ya, ọ gaghị ahapụ kemịkal fọdụrụnụ.
Ozonization bụ ọgwụgwọ ọ bụla na-eji ozone. Ngwa ndị bụ isi nke ọgwụgwọ a bụ mkpochapụ gburugburu ebe obibi na deodorization na ọgwụgwọ mmiri na ịdị ọcha. N'ụzọ dị otú a, pathogenic microorganisms na ísì nwere ike ikpochapụ.
Enwere ike imepụta ozone site n'aka onye na-emepụta ozone ma ọ bụ ihe na-emepụta ozone. Ngwa ndị a na-adọta oxygen n'ikuku n'ime ime ma na-emepụta mwepu voltaji gafee electrodes (a na-akpọ "corona effect"). Nbudata a na-ekewa atọm abụọ na-emejupụta ikuku oxygen, bụ́ nke na-ejikọta atọ ma ọ bụ atọ n’ime atọm ndị a iji mepụta molekul ọhụrụ a na-akpọ ozone (O3).
Ya mere, ozone na-anọchi anya ụdị ikuku oxygen kacha arụ ọrụ, nke nwere atọ oxygen atọ, nke nwere ike ịlụso ihe ndị na-akpata ọrịa ọgụ na / ma ọ bụ ogige ndị na-emerụ ahụ (ihe bụ isi nke mmetọ gburugburu ebe obibi).
O nwere ike ịbụ njirimara ozone kachasị mkpa ma nwee ngwa ndị ọzọ. Microorganisms bụ ụdị ndụ ọ bụla nke ahụ anya mmadụ apụghị ịhụ ụzọ ma chọọ microscope ka o lee ha. Microorganisms a na-akpọ pathogens bụ ndị nwere ike ibute ọrịa na-efe efe. Ha na-anọkarị n'ụdị elu niile, ụdị mmiri ọ bụla, ma ọ bụ na-ese n'elu ikuku, na-esonyere obere uzuzu uzuzu, ọkachasị n'ebe mechiri emechi ebe ikuku na-eji nwayọọ nwayọọ na-emegharị.
N'ihi njirimara oxidizing ya, a na-ewere ozone dị ka otu n'ime microbicides kachasị dị ngwa na nke kachasị dị irè nke a maara, nke nwere ike ime ihe na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke microorganisms, dị ka nje bacteria, nje, fungi na spores. Ihe ndị a niile na-akpata nsogbu ahụike mmadụ na isi ísì ọjọọ.
Ozone na-egbochi microorganisms ndị a site na imeghachi omume na enzymes intracellular, ihe nucleic acid na envelopu cell ha, spores na capsid viral. Ya mere, N'ihi mbibi nke mkpụrụ ndụ ihe nketa, microorganisms enweghị ike ịgbanwe ma mepụta iguzogide ọgwụgwọ a. Ọrụ ozone bụ oxidize ụmụ irighiri ihe ndị dị na cell membrane iji hụ na ha apụtabeghị ọzọ.
Ọgwụgwọ ozone enweghị isi, yabụ na ọ bụghị naanị na ọ na-ahụ maka ịgbasa na iwepu ụdị isi ọ bụla, mana ọ pụtaghịkwa isi ísì na njedebe nke ojiji. Okwesiri iburu n'uche na ozone adighi-emepụta ihe ọ bụla, ebe ọ bụ ihe na-adịghị akwụsi ike, ọ na-achọ ịlaghachi n'ụdị mbụ ya, oxygen (O2), ya mere, na-asọpụrụ gburugburu ebe obibi na ngwaahịa, na-ahụ maka ọdịmma nke ndị mmadụ.
Ọrụ ọzọ nke ozone bụ na ọ nwere ike ikpochapụ ụdị isi ọ bụla na-adịghị mma na-ahapụghị ihe fọdụrụnụ. Ụdị ọgwụgwọ a bara uru nke ukwuu na oghere mechiri emechi ebe enweghị ike imegharị ikuku mgbe niile. N'ụdị oghere a, ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ abanye, a ga-emepụta ísì ọjọọ (ụtaba, nri, iru mmiri, ọsụsọ, wdg) n'ihi mmetụta nke ụmụ irighiri ihe ndị a kwụsịrị na microorganisms dị iche iche dị na ya.
E nwere ihe abụọ na-akpata ọgụ ozone: n'otu aka, ọ na-eme ka ihe ndị dị ndụ oxidizes, ma e wezụga site n'ịwakpo ya site na ozone, na n'aka nke ọzọ, ọ na-awakpo microorganisms na-eri nri na ya. Ozone nwere ike ịwakpo isi ísì dị iche iche. Ihe niile dabere na ọdịdị nke ihe na-akpata isi ísì. Dabere na akụrụngwa a, ị nwere ike ikpebi adịghị ike gị na ozone yana dose achọrọ iji wepụta ozone.
Ozone oyi akwa
Ozone bụ ihe nchekwa dị mkpa maka ndụ n'elu ụwa. Nke a bụ n'ihi ọrụ ya dị ka ihe nzacha nchebe megide radieshon ultraviolet sitere na anyanwụ.
Mgbe ultraviolet radieshon sitere na Sun kụrụ ozone, ngwongwo ahụ na-agbari n'ime oxygen atom na oxygen nkịtị. Mgbe oxygen na nkịtị na atom atom na-ezukọ ọzọ na stratosphere, ha na-esonyere ịmalite ozone molecule. Mmeghachi omume ndị a na-adịkarị na stratosphere na ozone na oxygen na-ebikọ n'otu oge.
A na-emepụta ozone karịsịa mgbe ikuku oxygen na-enweta ume dị ukwuu. Mgbe nke a mere, ụmụ irighiri ihe ndị a na-aghọ ikuku oxygen radicals. Nke a gas na-adịghị akwụsị akwụsị, ya mere mgbe ọ zutere molekul oxygen ọzọ a na-ahụkarị, ọ ga-ejikọta wee ghọọ ozone. Mmeghachi omume a na-eme kwa sekọnd abụọ ma ọ bụ karịa.
N'okwu a, isi ike nke ikuku oxygen nkịtị bụ ụzarị ultraviolet sitere na anyanwụ. Ìhè ụzarị ultraviolet bụ ihe na -akpata mbibi nke ikuku oxygen n'ime ikuku oxygen. Mgbe atọm na molecule oxygen molecule zutere wee mepụta ozone, radieshon ultraviolet n'onwe ya na -ebibi ya.
Na ozone oyi akwa bụ nọgidere ịmepụta na ibibi mkpụrụ ndụ ozone, oxygen oxygen na atɔm biako. N'ụzọ dị otu a, a na - ewepụta ihe ike dị egwu nke ozone mebiri ma mepụta. Nke a bụ etu ozone si arụ ọrụ dị ka nzacha nke na-anaghị ekwe ka ụzarị ọkụ na-emerụ ahụ gafere n'elu ụwa.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere ozone na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ozone
Ụdị ugwu mgbawa